Yeyiphi ifonti esebenzisa ipeyinti kaMicrosoft? - Imicrosoft
Eyona > Imicrosoft > Imigca yepeyinti kaMicrosoft- indlela yokwenza ngayo
Imigca yepeyinti kaMicrosoft- indlela yokwenza ngayo
Yeyiphi ifonti esebenzisa ipeyinti kaMicrosoft?
Inkqubo ye-yenzaiqhubeka nokutshintsha iye kwiCalibri kwiIpeyinti yeMSniniusebenzisaIsiNgesi (iBelgium) ulwimi lokufaka.Julayi 1 2019
ikhowudi yemveliso ye-chromium
Ndizongeza njani iifonti kwi-MS Paint?
Kwenziwa kanjaniYongeza iifontiyeIpeyinti yeMicrosoft
Khangela ifayile ye-zip enefayile ye-yenzaukuba ufunafaka. ...
Cofa ekunene kwiyenza, emva koko ucofe ku Khipha konke ukhetho.
Cofa iqhosha elithi `` Khipha '' kwikona esezantsi ngasekunene kwefestile ukukhupha umxholo wefayile ye-zip kwifolda kwindawo enye.
Ndiza kuyivala le fonti yokukhuphela, kubonakala kuyinto entle kwaye ucofe kuyo okanye ungayikhuphela kwangoko ukuba uyathanda izifinyezo kwaye ucofe ukhuphelo emva koko uphume kancinci iwindow, sukuyivula , kungcono ukuyigcina kwimeko apho izinto zingahambi kakuhle Ke masiqhubeke kwaye siyigcine, iya kuba yidesktop, akufuneki ithathe ixesha elide kwaye xa sele uyikhuphele konke ekufuneka ukwenzile kukucofa ngokuchanekileyo kwaye cofa.
Ukukhupha yonke into kuya kuyikhupha kwifolda ye-zip kwaye xa usenza ifolda entsha unokucima ifolda endala xa uyikhuphile. Vula ifolda kwaye kufuneka ube nefayile yefonti ye-TrueType okanye enye into ethi into malunga noLonwabo isixhenxe okanye iVista uhambe iPhaneli yokuLawula kunye nokuBonakala kunye nokwenza ubuNtu emva koko uhambe yonke indlela ukuya kwiFonti, ekufanele ukuba ingezantsi xa ungafumana Ifolda enye enefonti yokubhaliweyo ndinamagama ambalwa afakelwe kakuhle ukuze ufuna ukuba ulonwabo lwakho luvuleke kwiphaneli yokulawula, emva koko uvule ifolda yakho ekhutshelweyo kwaye ngoku ufuna ukucofa uze uyirhuqe uze uyilahle kwifonti eneenkcukacha. Iphaneli yokulawula bekufanele ukuba ifakelwe. Nje ukuba ifakiwe ungaya phambili kwaye uphume kwaye uphume kuzo zombini iiwindows xa sele ifakiwe leyo intle kakhulu ngoku ungayisebenzisa ngokungacacanga ngoku ibonisa ukuba iyasebenza masihambe kwaye sihamba zintlungu kwaye masihambe kwaye kumnandi ngokwenene Ndiyilibale into ebandayo ndilixesha elifutshane lememori eyonwabisayo espontano intambo yolonwabo-tana kwaye ewe lithemba elilula ngenene elincedayo kwaye lihlale libukele, ngakumbi ukuthanda nokubeka izimvo kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho nceda ubhalise ku Fumana amanqaku angaphezulu
Ndiyichonga njani ifonti kwipeyinti?
Cofa ngaphakathi kwendawo yokubamba, okanye ucofe u-Enter ukugqibezela ukufaka. Ukuba ufuna ukurhoxisa, cinezela u-Esc. Kwi-WhatTheFont?! Indawo yeWebhuyenzaoyifakileyo iyaboniswa.
ukhe waya kwiwebhusayithi ufunde iphephancwadi ikhadi lebhizinisi wabona ipowusta equlethe ifonti abantu abatsha abacinga ukuba ungafuna ukuyisebenzisa kwiprojekthi ikwayingxaki encinci awuyazi igama lale fonti kakuhle namhlanje Ndiza kukunika usetyenziso olukhulu onokulufaka kwi-smartphone yakho onokuyisebenzisa ukuchonga amagama weefonti Kulungile bantu, nantsi iapp endifuna ukukubonisa yona namhlanje. Kugqunywe ngazo zombini ezi zinto, kuya kufuneka ufake iapp kwaye ngokukhawuleza uyifakele, yazisa usetyenziso kwaye uyabona ukuba inemowudi yekhamera ebukhoma apha, sebenzisa amaqhosha aphakathi ukwenza umnxeba wokuthatha ifoto kunye neqhosha lasekunene ukuvula okanye ukucima ifleshi. Namhlanje ndiza kukubonisa imizekelo embalwa yendlela esebenza ngayo namhlanje.
Okokuqala, masithi ndiyayithanda ifonti emanzini am ikhadi lam lobulungu bam amatye kwaye ndifuna ukusebenzisa loo fonti kwenye iprojekthi, kodwa andazi ukuba ibizwa njani, ke indlela yokufumanisa ukuba, kulula kangakanani, ulayini nje nyusa into ofuna ukuyichonga, ucofe iqhosha eliphakathi lefoto kwaye iapp iyakuqonda nakuphi na ukuchwetheza emfanekisweni okuya kuyichonga, kwaye iphawule ezo ndawo ngeebhokisi ezithile ezilahliweyo kuyo ukuze ingafezeki kwaye ungasebenzisa i icon ebonakalayo ekunene ngoku ukwenza ezakho iibhokisi zokukhetha, kodwa njengoko ubona apha, kuyo yonke into endiyenzayo kukucofa iNye endifuna ukuyigqamisa kwaye ngoku uyabona ukuba kukho isangqa esiluhlaza kunye notolo kuyo. Ndiza kucofa kuyo kwaye ndizame ukuchonga loo font. Apha siyabona ukuba undinike uluhlu olukhulu lweziphumo ezivela kwiifonti ezifanayo, kodwa eneneni iziphumo zokuqala zilungile kwaye yiBaskerville Standard Roman entsha.
Ukuba ndifuna le fonti ndiza kuyicofa nje kwaye ndiza kusiwa kwiifonti yam iwebhusayithi apho ndingafumana khona lo mgca. Makhe sijonge omnye umzekelo, ke masibuyele kwiscreen esiphilayo kwaye ngeli xesha ndinombhalo wemagazini kwaye ndiza kuyilungiselela, ndithathe umfanekiso kwaye ndivumele ukuba yenze kwaye ndichonge ezinye zendlela endiza kuyibetha intengiso hit, pop isangqa esiluhlaza, yile fonti ichongwe njenge-Classy Pro, kodwa eyona nto intle kukuba andifuni ukusebenzisa le kanye, mhlawumbi ezinye zezo ziphumo zifumanekayo zilungele iprojekthi leyo Ndinayo engqondweni kwakhona kwakhona njengangaphambili, ndiza kucofa nje umfanekiso kwaye izakundinika ikhonkco lokuba ndibelane ngale fonti kunye nomnye umntu nge-imeyile okanye ndicofe ngoku kwindawo yam yeefonti nqakraza uthenge. Unokwazi ukufumana ifonti kwezinye iiwebhusayithi ungaya kuGoogle, ukuba uyalazi igama lefonti, lifake kuGoogle ngoku kwaye liyakubonisa uluhlu lweziphumo apho unokufumana khona loo font.
Ipholile kangakanani usetyenziso lwefonti ekulula ukuyisebenzisa kwaye iziphumo ezintle ziyathemba ukuba ulifumene inqaku? abantu abapheleleyo, ukuba unayo, mandibhalise kuyo ngokungathi awukenzi okwangoku kwaye nje ukuba ucofe ibellicon encinci, uya kwaziswa ngawo onke amanqaku amatsha endiwashicilelileyo apho ndide ndixelele ixesha elizayo xa ndikubona kwakhona, bantu bokudala
Ngaba ungachwetheza okubhaliweyo kwipeyinti?
Ukuyayongezaisicatshulwaibhokisi ngaphakathiIpeyinti, vulaanumfanekiso kunye nenkqubo kwaye ufumane isimboli 'A' kwiqela 'lezixhobo' lesithuba 'seKhaya'. Cofa u 'A' kwaye emva koko ucofe emfanekisweni kwaye urhuqe isikhombisi semouseukuyabeka iisicatshulwaibhokisi. ...Ukuyafakaisicatshulwa,chwethezakwiisicatshulwaibhokisi kwaye ucofe naphi na kwiphepha xawenasigqibile.13 ngov. Ngo-2018
Kule nqaku ndifuna ukukubonisa iziseko ezimbalwa zombhalo kwi-Photoshop. Zininzi iindlela onokusebenzisa ngazo isicatshulwa kwi-Photoshop. Ke masikuthathe isixhobo sokubhaliweyo kwibar yesixhobo, ukuba ucofa ubambe isixhobo sokubhaliweyo, ungabona iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zombhalo ezinje ngesixhobo esithe tyaba uhlobo lwesixokelelwano esimi nkqo Chwetheza isixhobo ngoku cofa nje kwi-tovas kwaye ubone ukuba ungumbhalo ongenanto wenziwe kwiphaneli yokwahlula.
Isilayidi sokulayisha ngokungacwangciswanga
Makhe ndingenise i-guru 99 yemfundo yasimahla ekwi-intanethi ukwenza isicatshulwa esikhethiweyo cofa nje umaleko wokubhaliweyo apha kwibar yezinketho jonga ezinye iindlela zokutshintsha isicatshulwa apha ungatshintsha izimbo zefonti yokubhaliweyo okukhethiweyo kukho uluhlu olukhulu Izitayile zefonti onokukhetha kuzo apha unokuseta iziphumo eziqhelekileyo zefonti njengenketho ebhalwe ngqindilili italic, singaseta ubungakanani bomgca onokucofa uze utsale le icon ukonyusa okanye ukunciphisa ubungakanani befonti nazi ezinye iindlela zokwenza ubungakanani befonti ucofe le icon Ukuvula ipaneli yokuzoba, equlathe lonke useto lombhalo, sinokubiza le paneli kwimenyu yewindows kule phaneli. Sinokhetho olufanayo njengakwibhari yokukhetha kunye nezinye iindlela ezininzi njengokulandela umkhondo, ukukala ngokuthe nkqo, ukukala ngokuthe tye, umbala wefonti kunye nezinye iindlela onokukhetha ukuzitshintsha kwisicatshulwa sakho ngoku. Yenza ukhetho lokubhaliweyo ngokunqakraza kabini umaleko wokubhaliweyo kwaye ucofe u-Ctrl + T ukuvula ifomati yomboniso Ungatsala kwaye ulinganise itekisi ngaphandle kokonakalisa.
Qaphela ubungakanani befonti yokubhaliweyo kwaye unciphise okubhaliweyo xa ucinezela ENTER Uyabona ukuba ubungakanani befonti butshintshiwe Unako ukukala isicatshulwa phezulu nasezantsi njengomfanekiso, kodwa ulahlekelwe emva kokuKala akukabikho komgangatho njengomfanekiso kuba xa silinganisela isicatshulwa isicatshulwa asiphindi senziwe isampulu kodwa ubungakanani bokubhaliweyo buyatshintshwa ukuze ngoku ibe nokukalwa ngaphandle kokonakalisa ukuba ufuna ukutshintsha isitayile sefonti khetha isicatshulwa kwaye uvule olu luhlu lweendlela zefonti onokuzikhetha enye yohlobo lwefonti okanye Khetha olu luhlu kwaye ukuba ufuna ukukhangela zonke izimbo zefonti nganye emva koko cofa nje kwigama lefayile yesitayile kwaye ugcine ikhethiwe. Emva koko cinezela amaqhosha atolo phezulu nasezantsi ukunyathela kuzo zonke iintlobo zefonti ngexesha elinye. Masithethe malunga nokuKhangela kunye nokuKhangelwa kweKerning kuthetha ukongeza okanye ukususa izithuba phakathi kokulandela umkhondo wabalinganiswa abathile okhethiweyo kuthetha ukukhulula okanye ukuqinisa ibhloko ekhethiweyo yombhalo Makhe nditshintshe umbala weli gama ukuze ubone ngokucacileyo umahluko njengoko utshintsha ixabiso lokulandela umkhondo Cofa phakathi kwala magama mabini kwaye beka isikhombisi sakho apho.
Indlela emfutshane yebhodi yezitshixo yokutshintsha ixabiso lokulandela umkhondo kukubamba iqhosha le-Alt kwaye ucofe iqhosha lasekhohlo nelasekunene ukonyusa okanye ukunciphisa umgama. Sebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo ukuba ufuna ukutshintsha isithuba emgceni wonke. Singasilinganisela isicatshulwa sethu ngokuthe tye nangokuthe nkqo ngokutshintsha amaxabiso kwi-Vertical Scale kunye ne-Scale Horizontal iinketho ke masithethe ngombhalo kwindlela ngoku.
Ndidweba ubume njengomendo ukuze sibeke isicatshulwa kuwo Ngoku jonga isikhombisi, xa sikwi-canvas engaphandle kwendlela ijongeka njengesikhombisi esiqhelekileyo sesicatshulwa kodwa xa ndisigcina ngaphezulu kwendlela, emva koko iyatshintsha kwaye isikhombisi esitshintshileyo sibonisa ukuba isicatshulwa sakho sinamathele kule ndlela Ngoku cofa kule ndlela kwaye ungangena isicatshulwa sakho emva kwale ndlela kwaye unokumisela indawo yokuqala kunye nesiphelo sombhalo osemendweni, ke khetha isicatshulwa cinezela kwaye ubambe iqhosha le-ctrl emva koko ubeke isikhombisi ekuqaleni kokubhaliweyo ungabona isikhombisi esitshintshileyo ngoku ucofe kuso kwaye utsale isikhombisi ukuze ubone amanqaku amabini ahlukeneyo umnqamlezo omncinci ubonisa ukuba le yindawo yokuqala isicatshulwa kunye nophawu olunamachaphaza amancinci lubonisa ukuba yindawo yokugqibela yesicatshulwa, ngenxa yoko awunakushiya lo mmandla umiselweyo. Ungawatshintsha la manqaku ngokubamba iqhosha le Ctrl, emva koko ucofe kwaye urhuqe, uskrole umbhalo phezulu nasezantsi ujikeleze umendo ngokuhambisa isikhombisi ngaphakathi nangaphandle kwendlela, kodwa ubambe iqhosha le Ctrl licofiwe. Sinokukwenza oku kwindlela elula ezotywe sisixhobo sepen indlela elula ngoku thatha isixhobo sokubhaliweyo ucofe kwindlela kwaye uqalise ukuthayipha kwaye uyakubona ukuba unentsebenzo efanayo apha njengoko besibonile ngaphambili kwaye ubhala ngaphezulu kwendlela yemilo ngoku Sithetha ngokwenza ngokwezifiso izitayile zefonti ngamanye amaxesha isitayile sefonti asinakuba yile nto uyifunayo, ke kwezo meko kufuneka uthathe isicatshulwa kwaye utshintshe oko ngokwemfuno yakho ungakwenza oko ngokubeka isicatshulwa kwindlela enye yokuguqula mandichwetheze igama elithi guru 99 emva koko ucofe ekunene kwesicatshulwa kwibhokisi yokubhaliweyo kwaye ukhethe ukwenza indlela yomsebenzi yokuguqula isicatshulwa sakho sibe ngumgaqo onokutshintsha nje umaleko wokubhaliweyo kwaye uza kubona iNdlela enye ejikeleze isicatshulwa eyenziweyo kunye nawe uzobona indlela yokusebenza apha kwiPaneli yeendlela izakwenziwa Ngoku gcina kuqala Ukuba utshintsha indlela emva koko bamba isixhobo sePen kwaye ukhethe iindawo ezithile zolawulo ofuna ukuzihambisa kwaye uzibeke ngokusekwe kumbono woyilo.
Inkxaso ye-hdcp iyafuneka
Kuya kufuneka ubambe iqhosha le Ctrl, emva koko ucofe kuyo nayiphi na indawo yolawulo kwaye uyihudule njengoko ufuna. Uyayibona indlela endiyitshintshe ngayo ifonti kwaye ndenza uyilo olutsha, ukuba ndicinga ukuba ndingasebenza kuphela nesimbo sefonti esinikiweyo ukufumana imveliso yam, andizukuphumelela ngalo lonke ixesha, ngamanye amaxesha kufuneka sitshintshe isicatshulwa kwiimfuno zethu . Ezi zezinye zeempawu ezinxulumene nesicatshulwa kwaye siza kuthetha ngezihluzi kwinqaku elilandelayo lokufundisa
Ndingayifumana phi ifonti yasimahla yePaint yeMicrosoft?
Ukuba awunayo ifonti, ungaya kwindawo enikezela iifonti zasimahla, ezinje nge-dafont.com okanye iifonti zikaGoogle. Funda indlela yokukhuphela ifonti kwiifonti zikaGoogle ukubona ukuba isebenza njani. Qaphela ukuba uyakufuna ukusayinwa kwiWindows ngeakhawunti yomlawuli ukuze ufake ifayile entsha.
Ngaba unokongeza iFonti kuGoogle Paint?
Uninzi lwamaxesha abaphuhlisi bewebhu basebenzisa ezinye iifonti ngaphandle kweefonti ezichazwe kwangaphambili ukwenza iisayithi zabo zithandeke ngakumbi kubasebenzisi. Ipeyinti isebenzisa ilayibrari yeWindows ukufumana iifonti zayo, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ufake ifonti kwikhompyuter yakho kuqala. Olu qeqesho luya kukukhokela ukongeza ifonti kuGoogle.
Bangaphi oonobumba abakwi-mspaint font?
Ifonti kaMsPaint inabalinganiswa abachaziweyo abali-116 kunye neeglyfu ezingama-91 ezizodwa. Ifonti iqulethe oonobumba abakolu luhlu lulandelayo lwee-unicode: isiLatin esisisiseko (93), isiLatin-1 iSongezelelo (8), isiGrike nesiCoptic (1), uCyrillic (1), iziphumlisi ngokubanzi (10), iisimboli ezinjengeeleta (1), iMathematics Abaqhubi (1). Akukho zimvo okwangoku. Yiba ngowokuqala ukunika izimvo.
Luhlobo luni lwefonti ebonakala ngathi ipeyinti?
Iifonti zePeyinti Iifonti zepeyinti zilinganisa indlela yokusebenzisa ipeyinti engamanzi okanye ipeyinti efafisiweyo.